ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး - ဝီကီပီးဒီးယား
လသာမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာနိုင်ငံ
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးဟုလည်း ခေါ်သည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ရန်ကုန်မြို့၊ လသာမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဓိကကျသော ပြည်သူ့ဆေးရုံတစ်ရုံဖြစ်သည်။ ဆေးရုံဝန်းမှာ ၃၅ ဧကရှိပြီး ကုတင် ၂၀၀၀ ဆံ့ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာများအတွက် ဆေးကုသဆောင် ၃ဆောင်၊ ခွဲစိတ်ကုသဆောင် ၃ဆောင်၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့် အရိုးရောဂါကုသဆောင် ၁ဆောင်နှင့် အထူးရောဂါကုသဆောင် ၂၄ဆောင်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ဆေးကုသဆောင်၊ ခွဲစိတ်ကုသဆောင်နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာဆောင်များအတွက် အရေးပေါ်ဌာနများလည်း ရှိသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဆရာဝန်ပေါင်း ၃၀၀ယောက်နှင့် သူနာပြုပေါင်း ၄၀၀ယောက်ခန့် အမှုထမ်းလျှက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ဝိတိုရိယခေတ် ဗိသုကာပုံစံဖြစ်သော အနီရောင်အုတ်ခဲနှင့် အဝါရောင်ဆေးများဖြင့် မွမ်းမံတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၊ သူနာပြုတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)တို့၏ အဆင့်မြင့်သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် အခြားပြည်သူ့ဆေးရုံများကဲ့သို့ပင် အခြေခံ အထောက်အပံ့များနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများစွာ လစ်ဟင်းလျှက်ရှိသည်။ အများပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာ အခမဲ့ဟု ဆိုသော်ငှားလည်း ဆေးဖိုးနှင့် သက်ဆိုင်ရာကုသမှုများအတွက် ကုန်ကျမှုများကို လူနာများမှ ပေးဆောင်ရသည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပထမတန်းစား ဆေးတက္ကသိုလ်များ၏ အဓိကသင်ကြားရေးဆေးရုံကြီးဖြစ်သောကြောင့် အခြားနယ်များရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံများထက် ပို၍အရည်အချင်းမြင့်မားသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများရှိသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် အများအားဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများတွင် ကုသမှုမခံယူနိုင်သော (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်မကုသနိုင်သော လူများအတွက် ဖြစ်သည်။
၃ သင်ကြားရေး အစီအစဉ်များ
၃.၂ ဒီပလိုမာ (Dip.Med.Sc.)
၃.၃ ဘွဲ့လွန် (M.Med.Sc.)
၃.၄ ဒေါက်တာဘွဲ့ (Dr.Med.Sc.)
၁၉၀၀နှစ်ဦးပိုင်းအတွင်း ဆောက်ပြီးစ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ယခင် လေဟာပြင်ဈေးနေရာ သစ်သားအဆောက်အဦမှ ပြောင်းလာခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ စတင်တည်ဆောက်စဉ်က သူနာတန်းဟု ခေါ်သည်။ လူနာများ အဆောက်အဦနှင့် မမျှ ဖြစ်လာ၍ လက်ရှိဆေးရုံကြီးနေရာ၌ ဆေးရုံသစ်ကြီး တည်ဆောက်သည်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်ထက် ၁၈၉၉ခုနှစ်တွင် Rangoon General Hospital အဖြစ် ကုတင် ၃၄၂ဆံ့ဆေးရုံဖြင့် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဝိတိုရိယခေတ် ဗိသုကာပုံစံဖြစ်သော အဓိက ၃ထပ်ဆောင်ကို ၁၉၀၅ခုနှစ် မေလ ၆ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးနောက် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကုတင် ၅၄၆ဆံ့ ဆေးရုံကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၁၉၆၄ခုနှစ်တွင် အထူးရောဂါကုသဆောင်သစ်များ တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး ကုတင် ၁၅၀၀ဆံ့အဖြစ် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ယနေ့ကာလတွင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအား ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် အဆောက်အဦးတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အထူးရောဂါကုသဆောင် ၂၄ဆောင်နှင့် ရောဂါရှာဖွေဆောင် ၅ဆောင်တို့ ရှိသည်။ ထို့အပြင် မှုခင်းဆေးပညာဌာန၊ ဗဟိုအမျိုးသားသွေးလှူဘဏ်၊ ဆေးပညာမှတ်တမ်းဌာန၊ ဇီဝဆေးပညာ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ စားဖိုခန်း၊ အဝတ်လျှော်ခန်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနတို့လည်း ရှိသည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသည် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၏ အဓိကသင်ကြားရေး ဆေးရုံကြီးဖြစ်သည်။ သူနာပြုတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)တို့မှ သူနာပြုသင်တန်းသားများနှင့် ဆေးဘက်အကူများကိုလည်း သင်ကြားပို့ချပေးသည်။
တီဘီနှင့် ရင်ခေါင်းရောဂါ ဆေးပညာ
အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာ
ဆေးရုံ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျန်းမာရေး အုပ်ချုပ်မှုပညာ
ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောရောဂါ ဆေးပညာ
ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောရောဂါ ခွဲစိတ်ကုသမှုပညာ
ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဆေးပညာ
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းရောဂါ ဆေးပညာ
မျက်နှာနှင့် မေးရိုး ခွဲစိတ်ကုသမှုပညာ
အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ် ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး ဆေးပညာ
↑ ၁.၀ ၁.၁ Yangon General Hospital။ Yangon City Development Committee။2October 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-01-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Illegal hawkers, squatters continue to plague hospital | The Myanmar Times
↑ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃)။ မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်။ မဇ္ဈိမစာပေ။ p. ၁၆။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး&oldid=637089" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။